अनशनरत डा. केसी बिरामी जाँच्दै – Koshidaily
अनशनरत डा. केसी बिरामी जाँच्दै
access_alarms Koshi daily ३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:१२	chat_bubble_outline 0	Comments
सुर्खेत । आइतबारदेखि आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसी मन्दिरमै बिरामी जाँच्न थालेका छन् । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ६ रानिचौरमा रहेको बाबिरा मष्टोको (थान) मन्दिर परिसरमा बसेर १९ औँ पटक सत्याग्रह सुरु गरेका डा केसी भोकभोकै बिरामी जाँच्न थालेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशन बसेका डा केसीले भने, ‘मेरा माग पुरा नभए बरु मर्न तयार छु। तर अनशन तोड्ने छैन। मेरो अन्तिम सास रहुन्जेल अनशनमै बिरामीको सेवा गर्छु ।’ केसी मन्दिरमा अनशन बसेको थाहा पाएपछि स्थानीय वासी त्यही पुगेर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या देखाउन थालेका छन् ।
यसअघि १६ औँ पटक जुम्लामा सत्याग्रह बस्दा २०७५ साउन १० गते आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर डा केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् । पहिलाको स’त्याग्रहका बेला गरिएका सम्झौता अहिलेसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफू फेरि अनशन बस्न बाध्य भएको डा केसीले बताए । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।